BroadcastAsia 2018 တွင်မြက်ချိုင့်ဝှမ်းတွင်စုပေါင်းအစုစုကိုပြသသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » မြက်ချိုင့် BroadcastAsia 2018 မှာစုစုပေါင်းအစုစုကိုရည်ညွှန်းပြသ
Montreal, ဇွန်လ 12, 2018 - BroadcastAsia 2018 မှာ, မြက်ချိုင့်တစ်ဦး Belden အမှတ်တံဆိပ် (Booth 4R2-01), ၎င်း၏စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ဖြေရှင်းနည်းများကိုသရုပ်ပြနှင့်မည်သို့အသစ်ပေါင်းစပ်အစုစုနှင့်အတူပါလိမ့်မယ် Snell အဆင့်မြင့်မီဒီယာ (SAM) တစ်လျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေတဲ့မီဒီယာရှုခင်းအတွက်ဆွဲဆောင်မှုနဲ့စွဲငြိဖွယ်ရာ၏အကြောင်းအရာကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ပို့ဆောင်၏စိန်ခေါ်မှုများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ထုတ်လွှင့်, သတင်းအဖွဲ့အစည်းများ, အခွင့်အရေးကိုကိုင်ဆောင်သူနှင့်မီဒီယာဝန်ဆောင်မှုပေးဖွင့်သည်။
စားသုံးသူများ ပို. ပို. အွန်လိုင်းကနေလူမှုရေးမီဒီယာ, သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုအကွာအဝေးကနေသူတို့ရဲ့ content တွေကို curate အမျှထုတ်လွှင့်တုံ့ပြန်ရန်ဖိအားအောက်မှာရှိပါတယ်။ စားသုံးသူကိုလည်းပိုပြီးနှင့်အရည်အသွေးပိုကောင်းအကြောင်းအရာ access ကိုလိုခငျြအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ဒီအစဉ်အဆက်-တင်းကျပ်တဲ့ဘတ်ဂျက်အပေါ်ကိုအပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့် Workflows ယခုလက်ရှိနှင့်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ခေတ်ရဲ့သွက်လက်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
နေရာအရပ် 2018th ကြာပေးသော BroadcastAsia 26 ၏တက်ရောက် - ထို Suntec စင်္ကာပူမှာ 28th ဇွန်လ, မြက်ချိုင့်ဖွင့်အစုစုကိုဖောက်သည်ဤစိန်ခေါ်မှုများကိုဦးခေါင်း-အပေါ်ဖြည့်ဆည်းဖို့ခွင့်ပြုသောတီထွင်မှုများမောင်းနှင်နေသည်ဘယ်လိုဦးပထမဦးဆုံးလက်မြင်လိမ့်မည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသည် IP အခြေခံအဆောက်အဦများ, Cloud နှင့် virtualized ပလေးအောက်နှင့်အဆင့်မြင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်အပါအဝင်သော့ချက်လျှောက်လွှာဒေသများ၏အကွာအဝေးကနေဖြေရှင်းချက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။
Somu Patil, ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရောင်းအားအာရှ, မြက်ချိုင့်, အပြီးတွင် "commented Belden'' s ကိုဆမ်၏ဝယ်ယူ, မြက်ချိုင့်ယခုစျေးကွက်အပေါ်ဖြေရှင်းချက်၏အရှိဆုံးပြည့်စုံအစုစုကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ BroadcastAsia 2018 မှာကျနော်တို့နှစ်ခုတွင်လည်းများ၏ပေါင်းစည်းမှုကိုမှန်ကန်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကားမောင်းနှင့်ပိုပြီးကြည့်ရှုဖို့အကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာဖန်တီးကယ်နှုတ်သောသူတို့၏စွမ်းရည်အပေါ်သုညအပေးအယူတွေနဲ့ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့အနာဂတ်အထောက်အထားအခြေခံအဆောက်အဦများနှင့် Workflows တစ်ရပ်တည်ဆောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဖွင့်ဘယ်လိုပြသပါလိမ့်မယ်။ "
၎င်း၏တဲမှာမြက်ချိုင့်သစ်ကိုပြသပါလိမ့်မယ် iTX Flex ကို ဖြေရှင်းချက် - ချောမွေ့စွာ SaaS အဖြစ်ပေးအပ် microservices, အသုံးပြု. မိုဃ်းတိမ်ကိုပလေးအောက် orchestration ကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်ချိတ်ဆက်မှငွေရရှိအောင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပထမဆုံးစစ်မှန်တဲ့-မိုဃ်းတိမ်ကို automated ပလေးအောက်ပလက်ဖောင်း။ iTX Flex ကို၏သည်မိုဃ်းတိမ်ဗိသုကာပိုမြန်ဝန်ဆောင်မှုပစ်လွှတ်ပိုခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်များနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်နိမ့်စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ပေးပါသည်။
ဒါ့အပြင် display ကိုအပေါ် 4K UHD အပါအဝင်အကြောင်းအရာ formats အမျိုးမျိုးနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးမြက်ချိုင့်ရဲ့ထုတ်လုပ်မှု Switcher ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဧည့်သည်များ, စက်မှုလုပ်ငန်းအကြီးမားဆုံး IP ကို ​​I / O ခြေရာကိုဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုအင်ဂျင်ကနေ, လိုအပ်ချက်များကို၏ကျယ်ပြန့ကိုက်ညီကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း-ပြောင်းလဲခလုတ်ဖြေရှင်းနည်းများကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ် GV K-Frame က X ကို, အမှ Kahuna 6400, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုထူးချွန် format နဲ့ဘက်စုံကယ်တင်တော်မူသောခလုတ်များနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း GV Korona K-Frame က V-စီးရီး ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် 12G-SDI ဆက်သွယ်မှုများအတွက်။
မြက်ချိုင့်ကိုလည်းအသုံးပြုသူ-generated content တွေကိုများ၏ပေါက်ကွဲအသံအတိုးအကျယ်တုံ့ပြန်သူတို့ဖြစ်ပျက်အဖြစ်ပုံပြင်များ captivating များအတွက်ကြည့်ရှုသူမျှော်လင့်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းဖို့သတင်းအဖွဲ့အစည်းများအားပေးနေသည်ဘယ်လိုတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တဲ၏ဆန္ဒပြပွဲများမည်ဖြစ်သည် GV STRATUS 6.0 - သတင်းထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ကိရိယာအရှိဆုံးပြည့်စုံ suite ကိုနှင့် EDIUS အရာမဆိုအခြားအယ်ဒီတာထက်ပိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေ, ကို formats နှင့်ဘောင်နှုန်းထားများတည်းဖြတ်မှုပေါင်း။
ဧည့်သည်များမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည် ICE ပေါင်းစည်းပလေးအောက် အဆင့်မြင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘို့ Morpheus အလိုအလျောက်အားဖြင့် powered သော။ ဒါဟာတစ်ခုတည်းသောစာရင်းမှမျိုးစုံရုပ်သံလိုင်းလက်ငင်းကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲနေသော, Real-time data တွေကိုနှင့်အတူ 2D သို့မဟုတ် 3D ဂရပ်ဖစ်တင်းပလိတ်များကိုအထောက်အပံ့အဖြစ်မြက်ချိုင့်ရဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်း-edge LDX ကင်မရာများအဆိုပါ LDX 86 အပါအဝင်N စီးရီးဇာတိ HDမြန်နှုန်းမြင့်ကင်မရာ optional ကို HDR နှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း LDX C3 စီးရီးနဲ့အတူ / 4G / 86K / High-Speed ​​ကင်မရာပလက်ဖောင်း။
EDIUS တိမ်တိုက်လည်း၎င်းတို့၏တဲအရေအတွက်ကို4D2-01 အပေါ် (AWS) ပလက်ဖောင်းအမေဇုံက Web Services ကပေါ်ပြေးသရုပ်ပြလိမ့်မည်။
မြက်ချိုင့်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်းကိုပိုမိုထွက်ရှာရန်, BroadcastAsia 2018 (4R2-01) သို့မဟုတ်အလည်အပတ်ခရီးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲသွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး grassvalley.com.
မြက်ချိုင့်, ထိန်းချုပ်မှုဖန်တီးနေရာတိုင်းမှာသို့သော်ထိုသို့မဖျက်ဆီးနေသည်အခါတိုင်းအကြောင်းအရာချိတ်ဆက်ဖို့ဖောက်သည်အားပေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။ ဒီအစဉ်အဆက်-ပြောင်းလဲနေတဲ့မီဒီယာရှုခင်းမှာတော့ content တွေကိုအရေးကြီးဆုံးဒြပ်စင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏အတော်များများ, PC များ, တက်ဘလက်မှအဖြစ်အစဉ်အလာလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်ထုတ်လွှင့်တစ်ပြိုင်နက်, ၎င်းတို့၏အမွေ Workflows လုပ်ကိုင်ရန်ဆက်လက်နေချိန်မှာ over-the-ထိပ်တန်းပလက်ဖောင်းအသစ် Workflows ဖန်တီးပံ့ပိုးပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နှင့်ဗီဒီယို-On-Demand နေကြတယ် နှင့်မိုဘိုင်း Device များ။
ကျနော်တို့ကြည့်ရှုဆွဲဆောင်ထားရန်ပိုကောင်းပုံပြင်များပြောပြနေချိန်မှာဖောက်သည်သူတို့၏စစ်ဆင်ရေးများထိရောက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးဖို့ဆန်းသစ် tools များနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုသည်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ထိရောက်မှု, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်မှု, အရည်အသွေးနှင့်အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုကို enable ပြုလုပ်မြက်ချိုင့်ရဲ့ပေါင်းစပ်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူ, ထုတ်လွှင့်နဲ့ content ဖန်တီးသူသူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဆက်ထိန်းရန်လိုအပ်သောအရာကိုရှိသည်။ မွန်ထရီရယ်အခြေစိုက်, မြက်ချိုင့်နီးပါး 60 နှစ်ပေါင်းများအတွက်ထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းဖြစ်နှင့် St. Louis-အခြေပြု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Belden ပိုမိုသိရှိလိုပါက Inc ကို, အလည်အပတ်ခရီး www.belden.com.
Belden, Belden အားလုံးအဆိုပါညာနေရင်မြန်အောင်ပေးပို့ခြင်းနှင့်, Belden လိုဂိုအမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်၏မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်များမှာ Belden အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အခြားတရားစီရင်မှုအတွက် Inc ကိုသို့မဟုတ်ယင်း၏တွဲဖက်ကုမ္ပဏီများသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောမြက်ချိုင့်ထုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်၏မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်များမှာ Belden Inc ကို, GVBB Holdings က SARL သို့မဟုတ်မြက်ချိုင့်ကနေဒါ။ Belden Inc ကို, GVBB Holdings က SARL, မြက်ချိုင့်ကနေဒါနှင့်အခြားပါတီများသည်လည်းဤနေရာတွင်အသုံးပြုသောသည်အခြားအသုံးအနှုန်းများအတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အခွင့်အရေးများရှိနိုင်ပါသည်။
မူပိုင်ခွင့်© 2018 မြက်ချိုင့်ကနေဒါ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ အသိပေးစာမပါဘဲပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်၏ Specifications ။
Katharine Guy [အီးမေးလျ protected] + 44 1635 265624
Lauren Alboini [အီးမေးလျ protected] + 44 (0) 20 7486 4900
LTN Global နှင့် Encompass Expand Partnership - ဇူလိုင်လ 22, 2020
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ BroadcastAsia BroadcastAsia2018 ထုတ်လွှင့် ထုတ်လွှင့် အသံလွှင့် မိုဃ်းတိမ်ကို မြက်ချိုင့် ip isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော တိုက်ရိုက်လွှထုတ်လုပ်မှု သတင်း သတင်းအဖွဲ့အစည်းများ ပလေးအောက် SaaS SAM ကို Snell အဆင့်မြင့်မီဒီယာ virtualization လုပ်ငန်းအသွားအလာ 2018-06-15
ယခင်: Signiant နယူး Partner, စံပြစနစ်များနှင့်အတူအာရှအတွက်၎င်း၏ရောက်ရှိခြင်းများတိုးချဲ့ခြင်း
နောက်တစ်ခု: အဲရစ် Bolling / w တွဲဘက်ထုတ်လုပ်သူ / Booker, အမေရိက